१६ किलो मिटर सडक निर्माण गर्न कति समय लाग्छ? यहाँ आठ वर्ष लाग्यो, के कारण हुँदैन काम? – Gulmiews
१६ किलो मिटर सडक निर्माण गर्न कति समय लाग्छ? यहाँ आठ वर्ष लाग्यो, के कारण हुँदैन काम?
२८ जेष्ठ २०७३, शुक्रबार १२:४९ Sanju Kauchha
No comments	बलेवा (बागलुङ) । जिल्लाको दुदिलाभाटीदेखि हुग्दीशिरसम्मको १६ किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न हुन आठ वर्ष लागेको छ । २०६४ साल देखि निर्माण सुरु गरिएको उक्त सडक खण्ड निर्माण सुरु भएको आठ वर्षपछि मात्रै सम्पन्न भएको हो ।
उक्त सडक दुदिलाभाटी, हुग्दीशिर हुँदै गुल्मी शान्तिपुर भएर बुटबलमा जोडिन्छ। सडक निर्माणका लागि करिब ६० लाख खर्च लागेको सडक निर्माण समितिका संयोजक बमबहादुर गुरुङले जनाकारी दिए। गुरुङका अनुसार सडक निर्माणका लागि दुदिलाभाटी गाविसबाट प्राप्त २१ लाख, जिल्ला विकास समिति बागलुङबाट प्राप्त १० लाख, अर्थमन्त्रालयबाट आर्थिक केन्द्र सडक सञ्जाल कार्यक्रममार्फत प्राप्त १० लाख र सडक विभागबाट प्राप्त १६ लाख गरी ५७ लाख सङ्कलन भएको हो। सडकले कृषि र पशुपालनका दृष्टिले महत्वपूर्ण त्यस भेगमा उत्पादित कृषिजन्य वस्तुको बिक्री गरी आयआर्जन गर्नसमेत सजिलो हुने स्थानीयवासी गिरीप्रसाद श्रीसले बताए। सडक निर्माणसँगै हुग्दीशिर र बाटाकाचौर गाविसका स्थानीयवासीलाई गलकोट हुँदै सदरमुकाम पुग्नसमेत सजिलो भएको छ। -रासस